အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် သဉ္ဇာမြင့်မိုရ် – Celebrities – Local Celebrity – Duwun
အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် သဉ္ဇာမြင့်မိုရ်
အသားပေါင်းအိုးပေါက်ကွဲပြီး မိသားစုဝင်တွေ အပူလောင်ခဲ့ရတာတဲ့။
Myat 2018-07-11 07:56:00.0, 2018-07-11 07:56:00.0
သရုပ်ဆောင် သဉ္ဇာမြင့်မိုရ်ရဲ့ နေအိမ်မှာ Hot Pot လုပ်စားရာက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး သူမမှာ အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ခဲ့ ရပါတယ်။ မိသားစုဝင် လေးဦးကတော့ အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး အပူတွေ လောင်ပြီး ခွဲစိတ်ခန်းထဲ ဝင်ခဲ့ရ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပရိသတ်တွေနဲ့ မစိမ်းလှတဲ့ သရုပ်ဆောင် သဉ္ဇာမြင့်မိုရ်က အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုလိုက် အိမ်မှာ Hot Pot ချက်စားဖို့ ပြင်ဆင်ရင် အသားပေါင်းအိုး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်မှာ သူမက ဘာမှမဖြစ်သွားပေမယ့် ဖခင်နဲ့ ညီမနှစ်ယောက်မှာ ကံဆိုးသွား ခဲ့တဲ့ အတွက် အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။
Photo: သဉ္ဇာမြင့်မိုရ် FB (အသားအိုးပေါင်းတဲ့အိုးပါ)
အသားပေါင်းအိုးကို အငွေ့မထုတ်မိရာက စတဲ့ ဆိုးကျိုးကြီးဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပြောထားပါတယ်။ ပေါင်းအိုးထဲမှာ ဝက်နံရိုးကို ထည့်ပေါင်းပြီး ဟင်းရည်နဲမှာစိုးလို့ အဖုံးဖွင့်ရာက ပေါင်းအိုးအဖုံးမှာ ဖွင့်မရတာကြောင့် မီးပလပ်ဖြုတ်ပြီး ဓါးဦးနဲ့ ကလန့်ပြီး ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဖခင်နဲ့ ညီမလေးနှစ်ယောက်က အဖုံးဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ သူမက ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ဆေးပြီး အပြင်မှာ သွားချနေတုန်း ဖုန်းခနဲ့ ဆိုပြီး မီးဖိုခေါင်ကနေ အသံကြားလိုက်ရတယ်တဲ့။ပေါက်ကွဲသံနဲ့အတူ ပူတယ်ဆိုပြီး မီးဖိုးခန်းထဲမှာ ဆူညံပွက်လောရိုက်နေတာကြောင့် သူမ သွားကြည့် တဲ့ အခါမှာ မီးဖိုခန်းတစ်ခုလုံး ရေနွေးငွေ့တွေ မီးလောင်သလိုပဲ ဖုံးနေခဲ့တာဆိုပြီး ဇူလိုင်(၁၀) ရက်နေ့က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပြောပြားထားတာပါ။
မိသားစုဝင်တွေ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူမလည်း ယောင်ယောင်မှားမှားနဲ့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမလဲ မသိခဲ့ဘူးတဲ့။ သူမရဲ့ ညီမလေးဆို လည်း မျက်နှာကလွဲရင် တစ်ကိုယ်လုံးနီးပါ အပူတွေ လောင်သွားခဲ့တာပါ။
"မေ့ဆေးပေးပြီး operation ဝင်ခဲ့ရတယ်။ ပြောချင်တာက ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ကိုယ်သုံးမယ့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းရဲ့ အကျိုး အကြောင်း အဆိုးအကောင်းကို သေချာလေ့လာပြီးမှ သုံးပါ... အပူလောင်လျှင် အပူချိန်ကျအောင်သာ လုပ်ပါ." ဆိုပြီး သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ပြောပြထားပါသေးတယ်။
Photo : သဉ္ဇာမြင့်မိုရ် FB (ဖခင်ဖြစ်သူပါ)
သူမကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်နေရင်းက သူမ မပါပဲ အခုလို ဖြစ်သွားတာ သူမအတွက် ကံဖယ်ပေးခဲ့သလို ဖြစ်ပေမယ့်မိသားစုဝင်တွေ ခံစားခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်က သူမရဲ့ မျက်လုံးထဲက အခုအချိန်ထိ မထွက်နိုင်ဖြစ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။
"အဲဒီမြင်ကွင်းလည်း မျက်လုံးထဲက မထွက်ဘူး စိတ်လည်းတော်တော်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ အဆိုးဆုံးခံရတဲ့ ညီမလေးတစ်ဖွဖွ ပြောနေတဲ့ စကားလေးက မမ မဖြစ်လို့တော်သေးတယ်တဲ့။အငွေ့မထုတ်မိတဲ့အိုးက တည်နေရင်း အလိုလို ထပေါက်မယ့်အဖြစ်ကနေဆိုတော့ အသက် ဘေးတော့ လွတ်ခဲ့ကြတာပေါ့လေ.။ကံကြမ္မာဆိုတာကြိုမမြင်နိုင်ဘူးလေ.အားလုံးပဲ သတိထားကြနိုင်ဖို့ သတိပေးပါရစေ." ဆိုပြီး သူမက ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Photo : သဉ္ဇာမြင့်မိုရ် FB
သူမရဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် ပရိသတ်တွေလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။သဉ္ဇာမြင့်မိုရ်ဟာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာ ရရှိဖို့အတွက် ကြိုးစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။